Otu esi ejikọ Twitch Prime na GTA n'ụzọ dị mfe | Nzukọ mkpanaka
Cristian Garcia | 25/09/2021 09:58 | Egwuregwu
Na -eche ka esi ejikọ akaụntụ Rockstar gị Twitch Prime GTA iji nweta ụgwọ ọrụ? Ọ dị mma, anyị na -atụ anya na ọ dị mfe karịa. Ị ga -enweta ya ozugbo ị gụchara akụkọ a. Ọ bụ na ozugbo ị nwetara ya, ị ga -enwe ike nweta ọtụtụ ụgwọ ọrụ maka Grand Theft Auto Online ma ọ bụ maka egwuregwu Rockstar ọ bụla dị ka Red Dead Online. Naanị site na ijikọ akaụntụ ahụ, ị ​​ga -ejupụta obere onyinye.
Etu esi enye ego na GTA V Online na egwuregwu ndị ọzọ
Agbanyeghị na Grand Theft Auto Online nwere afọ iri n'azụ ya, egwuregwu vidiyo ka na -adị ndụ na -eto eto zuru oke maka ụdị ntanetị ya GTA Online na -enweta mmelite site n'oge ruo n'oge. Ndị mmepe Rockstar akwụsịbeghị ịchọ idobe egwuregwu vidiyo ahụ ma nwee ike soro ya gaa ọgbọ abụọ nke nkasi obi niile, ọ ka na -erekwa. Yabụ ọ bụrụ na ị bụ onye na -egwu Grand Online Theft Auto na ị nwekwara Twitch Prime, ị na -efu ọtụtụ ụgwọ ọrụ. Ka ị mara echiche ahụ N'oge ọkọchị gara aga a lebara nde na nde anya n'egwuregwu ahụ yabụ ị nwere ike mefuo ihe ọ bụla ịchọrọ na -enweghị nsogbu ọ bụla. Ihe niile na -efu Rockstar na ndị nrụpụta ya.
Ọ bụ ya mere anyị ji kwado ntuziaka a maka na anyị kwenyere n'ezie ọ bara uru ịmara otu esi eji Twitch Prime nke ọma. Onyinye ọ bụla nke Amazon na -enye site na Twitch na nke edepụtara na ibe nkwanye ugwu ejiji Twitch ga -adịrị gị. Ma ị nwere egwuregwu ma ọ bụ na ọ bụghị. Mana na nke a anyị chọrọ ilekwasị anya na Grand Theft Auto Online na otu esi ejikọ Twitch Prime GTA maka ụgwọ ọrụ niile ị na -efu. Yabụ, ka anyị gaa n'ihu na ntuziaka maka ijikọ akaụntụ Rockstar na Twitch.
1 Otu esi ejikọ akaụntụ Rockstar na Twitch Prime GTA
1.1 Otu esi ejikọ Twitch Prime na GTA na Rockstar Social Club
1.2 Jikọọ ikpo okwu gị na akaụntụ Twitch na Social Club
Otu esi ejikọ akaụntụ Rockstar na Twitch Prime GTA
Dịka anyị kwuru, ihe a niile ga -ewe gị nkeji ole na ole ma ejiri akaụntụ na ya mee ya na Rockstar na Grand Theft Auto Online yana akaụntụ na Twitch. Ị nwere ike ịnọ na -eche ka ihe a niile si arụ ọrụ na isi okwu bụ na Twitch nwere ọrụ akwụrụ ụgwọ akpọrọ Prime. Taa a na -akpọ ya Prime Gaming n'agbanyeghị na anyị niile maara ya dị ka “Prime”. Ọ nwere ike ịdị gị ka nke a.
Iji nwee ike nweta ya, ị ga -enwerịrị akaụntụ ị ga -enweta na -akwụ ụgwọ site na akaụntụ Amazon gị maka ọrụ Prime nke, na mgbakwunye na uru egwuregwu, nwere ndị ọzọ mgbe ị na -etinye iwu na Amazon. Site na nke ahụ, ị ​​ga -enweta ụgwọ ọrụ ndị a n'efu na nyiwe Twitch na naanị ị ga -ejikọ akaụntụ nke egwuregwu ọ bụla. Mana anyị ga -akọwa ya site na nzọụkwụ site ugbu a gaa n'ihu.
Otu esi ejikọ Twitch Prime na GTA na Rockstar Social Club
Dịka anyị na -ekwu tupu ihe ọ bụla ọzọ, ị ga -enwerịrị akaụntụ na Twitch Prime yana kwa na Rockstar Games Social Club. Ọ bụrụ na ịmaghị ikpo okwu Rockstar, ọ bụ isi ebe egwuregwu ịntanetị niile nke ụlọ ọrụ America na -arụ ọrụ. Ọ bụ n'efu n'efu ebe ahụ ị nwere ike nọrọ na akụkọ ya wee kpọọ GTA n'ịntanetị. Nke mbu, ị ga -edebanye aha na klọb mmekọrịta yana maka nke ahụ ị ga -eme ihe ndị a:
Ị ga -aga na webụsaịtị gọọmentị nke Rockstar Social Club na ozugbo ị nọ ebe ahụ, ị ​​ga -abanye ma ọ bụ debanye aha dabere ma ị denyerela aha na mbụ ma ọ bụ na ị denyeghị aha. Dịka ndụmọdụ mbụ anyị na -enye gị bụ iji otu adreesị ozi -e ahụ ị debanyere aha maka Twitch Prime na Social Club. Ọ bụrụ na ịbanyela, aha njirimara gị ga -apụta, ọ bụrụ na i mebeghi ya, ịgaghị emejupụta ihe achọrọ. Ozugbo ịmechara ndebanye aha ị ga -aga n'ihu na -ejikọ akaụntụ Twitch gị.
Egwuregwu kachasị mma 10 na ndị enyi gị igwu egwu na PC
Ọ bịarutere ebe a ka anyị na -ekwu na ị ga -ejikọ ihe niile na akaụntụ Twitch gị. Ozugbo ịchọtara nhọrọ ahụ na Social Club wee pịa ya, ị ga -ahụ nke ahụ na -akpọrọ gị gaa na ibe Twitch ebe ihe niile ga -adabere na inye ikike gaa na Twitch. Na mpio ahụ, a ga -egosi gị ịdọ aka na ntị na ụdị ihe ndị ọzọ ị kwesịrị ịnabata iji jikọta akaụntụ Twitch na akaụntụ Social Club. Ụfọdụ ihe a na -adọ gị aka na ntị bụ na ha ga -enwe ike ịhụ adreesị ozi -e gị, dịka o doro anya. Naanị pịa ikike na ọ bụ ya.
Jikọọ ikpo okwu gị na akaụntụ Twitch na Social Club
Ọ nweghị ihe fọdụụrụ ka ị nwee ike bido nweta ụgwọ ọrụ Twitch gị niile yana nwee ha na Grand Theft Auto Online ka ị nwee ike ịnụ ụtọ ha. N'ezie, ị nwere ike ịtụ ha maka ikpo okwu ọ bụla. Nke ahụ bụkwa ebe anyị na -aga ugbu a ebe ị ga -ejikọkwa ikpo okwu gị.
Ozugbo ịmechara usoro nke jikọta Twitch Prime GTA, akaụntụ klọb mmekọrịta yana Ihe niile anyị gwara gị na mbụ, ị ga -aga n'ihu na -eme ụdị ihe ndị ọzọ. Ị nwere ike ịnwe Steam, ma ọ bụ ị nwere ike si na XBOX na Playstation. Ọ bụ ebe ahụ ka ị ga -enweta akaụntụ na akaụntụ site n'elu ikpo okwu ọ bụla. Iji mee nke a, dịka ọmụmaatụ ma ọ bụrụ na i si na Playstation, ị ga -aga na Playstation gị wee jikọọ ya na Twitch na akaụntụ mepere emepe. Ị ga -eji XBOX na Steam megharịa ihe a niile ma ọ bụrụ na gị na ha gwuo egwu.
Echela na nke a bụ ihe pụrụ iche maka Grand Theft Auto Online, Rockstar na Rockstar Social Club ebe ọ bụrụ na ị bụ onye ọrụ Twitch Prime, ị ga -ejikọ nke ọ bụla n'ime akaụntụ egwuregwu vidiyo gị n'elu ikpo okwu. Kpọmkwem dị ka i mere na mbụ. N'ụzọ ahụ ị ga -amalite ịnata isiokwu niile nke egwuregwu vidiyo na -apụta.
Otu esi ere ụgbọ ala na GTA V (ọbụnadị offline)
Enwere m olileanya na akụkọ a enyerela gị aka yana na ị jikọtarala Twitch Prime na GTA V n'ịntanetị yana na site ugbu a gaa n'ihu, ị ga -abụ ọkachamara na -achụ nta ego Twitch. Nọrọ na -ege ntị ka ihe ọhụrụ na -agbada kwa ọnwa. Karịsịa, dịka anyị na -ekwu, etinyela uche na Grand Theft Auto Online ebe enwere ụgwọ ọrụ sitere na egwuregwu vidiyo dịka Valorant, League of Legends, Rainbow Six Siege na ọtụtụ ndị ọzọ. Oh na karịa ihe niile cheta na ugbu a ị nwere ike ịhapụ "Prime" gaa na iyi iyi kachasị amasị gị. N'ụzọ dị otú a, ị ga -eme ka ọ hụ na ị bụ onye na -eso ụzọ ya ogologo oge!
Obi abụọ ma ọ bụ ntụnye ọ bụla ị nwere ike hapụ ya na igbe nkọwa ị ga -ahụ n'okpuru. Hụ gị na edemede Mobile Forum na -esote.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Nzukọ Ekwentị » Egwuregwu » Otu esi ejikọ Twitch Prime na GTA